အားဖြင့်မှုတ်သွင်း 40516 လူတိုင်းက Awesome ကို, Lego ပရိတ်သတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ Pride-themed builds တွေကိုပို့နေကြပြီ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှဆောက်လုပ်သူများ LGBTQIA + အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအားလုံး၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွများကိုပြသခြင်းအားဖြင့် Pride သည်သူတို့အတွက်မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကိုသရုပ်ဖော်သည်။
အချို့သောပေါ်လွင်ချက်များသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မျှဝေသည် Lego အုပ်စုတွင်အုပ်စုနှစ်ခုအနေဖြင့်ရိုးရိုးအလွှာ၊ Trans နှင့် Pride အလံများ၊ သက်တံအပင်၊ Pride အရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပုံတူပန်းချီကားတစ်ချပ်နှင့်အတူဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင်အသေးစားရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည်။ artသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပန်းချီကားပြီးခါစပဲ 40516 လူတိုင်းက Awesome ကို အစုံ
မာနထောင်လွှားသည့်လအခမ်းအနားတွင်ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခဲ့သည် Lego ပရိသတ်တွေဟာ Pride ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာပြတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဆောက်ဖို့အားပေးတယ် ဒီနေရာမှာမီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။
? bradyjoynerbricks, Sebastian97, minifignick, picea ဖွင့်သည်#AFOL #လီဂို #လိင်တူချစ်သူများ #ကမ္ဘာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ # မာနထောင်လွှား #မင်္ဂလာဆောင်လ pic.twitter.com/DpFw0toI77
- Lego (@LEGO_Group) ဇြန္လ 10, 2021
တည်ဆောက်မှုအားလုံးသည်တရား ၀ င် Pride တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူတူညီသောရောင်စုံသော palette ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှကွဲပြားခြားနားသော queer အထောက်အထားများနှင့်အတူလျှပ်တစ်ပြက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းမကြာသေးမီကတစ် ဦး ကိုမြင်တော်မူ၏ Lego Marvel ပန်ကာတင် တစ် ဦး ရုပ်ပြစာအုပ် - လှည့်ကွက် ပေါ်ပြူလာ set ပေါ်မှာ။
40516 လူတိုင်းက Awesome ကို ဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင်ရောင်းချအပေါ်သွား၏, ဒါကြောင့်အလုံအလောက်လူကြိုက်များရရှိမှု တစ်စက္ကန့်ပြေးပြန်လာလိမ့်မယ် 2022. ၌ဤမကြာမီအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် Lego ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော p ကိုကြေညာအုပ်စုartLGBTQIA + အန်ဂျီအိုသုံးခုနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းသည် queer အသိုင်းအဝိုင်းအားသူတို့၏ထောက်ခံမှုကိုပြသရန်မှာ Pride လအပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်။
← ကာတွန်းလူငယ်သည် LEGO ဖန်တီးမှုကိုအသက်ဝင်စေသည်
LEGO ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလံကိုပြုလုပ်ပါ DOTS →